Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Pot Filler Faucets / I-WOWOW Pot Filler Brushed Nickel
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 8 izilinganiso ikhasimende
(8 Izibuyekezo ikhasimende)
SKU: 2311200 Categories: Ikhishi Faucets, I-Pot Filler Faucets Tags: Ibhodlela lokugcwalisa, Insimbi engagqwali, I-Wall Isekelwe
Kulula ukuyisebenzisa. Kufakwe esitolo sami setiye.Ngingancoma ukuthi abanye bathenge
Ngithengele umamezala wami owenza ikhishi lakhe kabusha. Uthandile ukubukeka nesitayela sayo.Isakhiwo esihle esiqinile.Ikhwalithi enhle neDizayini, ukushintshwa okuhle
Ucezu oluhle lokuqedela ikhishi elisha,
Ngemuva kwesipiliyoni esesabekayo ngomkhiqizo ohlukile oputshukile, sinqume ukuzama le ompompi yokugcwalisa imbiza. Kungumsebenzi osindayo futhi usebenza kahle kuze kube manje, akuvuzi, kulula kakhulu ukufaka. Ifana nayo yonke imishini yethu yasekhishini, thanda ukubukeka kwesiphetho se-nickel esiphundu, ikhwalithi yengono eqinile yethusi yinhle kakhulu, sijabule kakhulu ukuthi sithenge lo mkhiqizo.
Ngichithe izinsuku ezimbalwa ngifuna ipayipi lokugcwalisa ibhodlela le-nickel elinemigqa ehlanzekile, yesimanje ebikusabelomali sami. Ngithole le filler yembiza ku-wowow futhi angijabule kakhulu. Le ompompi iyikhwalithi enhle kakhulu, bekuwumoya oyifakayo, usebenza kahle, futhi ubukeka umuhle ekhishini lethu. Ngeke ngiphinde ngikhokhele amanani amakhulu emikhiqizo futhi. Ncoma kakhulu!
Kwenza ukupheka emabhodweni ami amakhulu kube lula angidingi ukuwasusa kusinki aye esitofini Usizo oluningi
Ungene nakho konke njengokufanekiselwa
Umkhiqizo omuhle wemali! Isebenza njengoba kufanele!
N *** dSepthemba 19, 2020 US
Ukubukeka okuhle kakhulu. Inani elihle, Libukeka lihlanzekile futhi liyabiza.Lilondoloze inqwaba yoku-oda lokhu kunokuyithenga kwesinye sezitolo zebhokisi cishe izikhathi eziphindwe kathathu. Kulula kakhulu ukufaka futhi kubukeka kukuhle!
Le ompompi obukeka kahle futhi kulula ukuyifaka